“Haddii Aniga & Cali-Gurey Nala Ansixin-Waayo, Waxa Ay Noqonnaysaa Khiyaamo, Xisbiguna Maxkamad Ka Dhammaan Maayo” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Haddii Aniga & Cali-Gurey Nala Ansixin-Waayo, Waxa Ay Noqonnaysaa Khiyaamo, Xisbiguna Maxkamad Ka Dhammaan Maayo”
Musharrax Jamaal Cali Xuseen
Hargeysa:(Hubaal)-Murrashaxa jagada madaxweynimo ee xisbiga UCID Md. Jamaal Cali Xuseen, ayaa ka hadlay khilaafka xisbiga UCID curyaamiyey, waxana uu si gaar ah carrabka ugu adkeeyey sida uu u arko in looga midho dhalin karo go’aamadii ay maxkamadda sare dhawaan khilaafka xisbiga kasoo saartay. Jamaal Cali Xuseen oo u warramay midka mid ah Telefishannada afka Soomaaliga ku hadla, ayaa ugu horrayn ka hadlay sidii ay isaga iyo guddoomiye Faysal isku soo galeen iyo wixii uu ka aaminsanaa xilligaas, “Annagu faysal waxa aanu u arkaynay nin weyn oo sujuud leh oo qawl eegaya, anigana Faysal baa ila soo xidhiidhay oo yidhi anigaa ku siinaya wixii aad UDUB ka doonaysaye halkan nala dhis.” Ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.
Jamaal oo ka jawaabayey su’aal nuxurkeedu ahaa haddii shirweynaha aan caadiga ahayn ee maxkamadu xisbiga ku amartay inuu qabsado lagu ansixin waayo isaga iyo guddoomiye-ku-xigeenka saddexaad ee xisbgia UCID MD. Cali-gurey oo ay haatan isku dhinac yihiin, ayaa arrintaas ku tilmaamay khiyaamo, isagoo xusay in haddii ay caddaalad-darro kale dareemaan aanu xisbiga maxkamadda ka bixi doonin, waxana uu yidhi,“Haddii aniga iyo Cali-gurey shirka la qabanayo nalagu ansixin waayo taasi waxa ay noqonaysaa khiyaamo, waayo wixii lagu heshiiyey ama waa la wada ansixinayaa ama waa la wada diidayaa, haddii uu Faysal wax khiyaameeyana xisbigu maxkamad ka dhammaan maayo.”
Murrashax Jamaal waxa uu sheegay inaanu guddoomiyaha xisbiga UCID ka haynin soo jeedin sax ah oo uu ku xisaabtami karo,, balse ay weli arrimuhu iskaga dhex qasan yihiin, “Faysal mar damac baa ku jira oo inuu mar saddexaad oo aanu sharciga xisbigu u oggolayn tartamo ayuu rabaa, haddii uu maanta ii yimaaddo oo uu yidhaahdo anaa doonayana wax bay ahaan lahayd.” Ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.